Dowladda oo sheegtay in tayada jaamacadaha Soomaaliya ay liidato – XOGMAAL.COM
Wasiir Goodax ayaa sheegay in guddigaan uu awoodu leeyahay dib u habeynta Tayada Waxbarasho ee Tacliinta sare, isla markaaana Jaamacadaha dalka oo dhanna uu dib u habeyn ku sameynayn doonaan.
Cabdullaahi Goodax Barre Wasiirka Waxbarashada iyo Tacliinta sare Soomaaliya ayaa sheegay in Wasaaraddiisa ay diyaarineyso Guddiga Tacliinta sare ee dalka oo dib u habeyn xooggan ku sameyn doona Jaamacadaha waddanka ku yaalla si loo hubiyo tayada waxbarasho ee bixiyaan Jaamacadaha .
Ku dhawaad 400 oo arday oo Soomaali ah ayaa ku xaniban dalka Turkiga sidda uu sheegay, sababta ayuu ku sheegay in aan la aqoonsaneyn Jaamacaddaha ay kasoo baxeen,islamarkaana Ardayda Soomaaliyeed halkaasi ay ku heysato dhibaato badan.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladda Turkiga Wasaaradda waxbarashadda ay u sheegtay in aan la aqoonsaneyn Jaamacaddaha qaar ee ku yaalla dalka,taasina ay dhibaato ku tahay Ardayda Soomaaliyeed ee dalka urkiga u aaday waxbarashada sare.
Ugu dambeyn Wasiirka Waxbarashada ayaa sheegay in sanadka 2020-ka ay rajo weyn ka qabaan in Jaamacadda Ummadda ay awood u yeelato in ay qaadato sannad walba (Toban Kun oo Ardey) 10,000 oo Ardey.